China Led လမ်းအလင်း China Manufacturers & Suppliers & Factory
Led လမ်းအလင်း - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Led လမ်းအလင်း ထုတ်ကုန်များ)
Lotus ပေါင်းစပ်မီးအိမ် Lotus ထိုကဲ့သို့သောကြာပန်းနဲ့တူကြာ, လက်နက်ဖြစ်၏ဗုဒ္ဓအဖြစ်အရှေ့တိုင်း culture.The ၏တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့်ငျးကှာလက်နက်ဖြစ်၏ဗုဒ္ဓသင်္ကေတ, ဘဝကိုလည်းဣနြေ္ဒအဆင့်ကြာပန်းကခြေလှမ်းဖြစ်ပါသည်, ကြာပန်းကဲ့သို့ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ရဲရင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်နှင့်တကွ,...
ဤသည်၎င်း၏အမည်ကိုအချိန်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းဖြစ်ပါသည်, high-ပါဝါ LED လမ်းအလင်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်, ဘုံလမ်းဆီမီးခွက်ကနေမတူညီတဲ့ထူးဆန်းတဲ့နှင့်ထူးခြားဆန်းပြား, ရင်ခုန်စရာအိပ်မက်အပြည့်အဝ, လိမ္မာပါးနပ်အသုံးပြုမှု lamplight ၏စီးဆင်းမှု linear, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံအိမ်ဖွဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအောင်မြင်ရန်အလို့ငှာဖြစ်ပါတယ်။...
တရုတ်စတိုင်မီးအိမ်အများအပြားအလင်းရင်းမြစ်များရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်မြင့်မားတဲ့ illumination နှင့်ကောင်းမွန်သောရှုခင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ, ကျေးဇူးတော်နှင့်ယဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရိုးရာကိုယ်စားလှယ်စီးရီးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ acrylic အဖုံးကို PC သို့မဟုတ်သွင်းကုန် PNNA...
Ginkgo Biloba တိုင်းရင်းဆေးပင်ပေါင်းစပ်မီးအိမ်
Ginkgo မီးခွက်နှင့်မီးအိမ်၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်နဲ့ပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ်အလင်းအိမ်, ဒီဇိုင်းလှုံ့ဆော်မှု ginkgo Biloba တိုင်းရင်းဆေးပင်ကနေကြွလာဂရုတစိုက်ပြုပြင်ထားသောပုံပျက်သော, တစ်ဦး ginkgo Biloba တိုင်းရင်းဆေးပင်၏အသွင်သဏ္ဌာန်, ဒီဇိုင်း ginkgo Biloba တိုင်းရင်းဆေးပင်လိုင်းများကိုပိုမိုစုံလင်သော, အဆင်းလှပါစေ, ginkgo Biloba...
LED ရေအောက်အလင်းအနီ, အစိမ်းနှင့်အပြာအရောင်များရေးစပ်သော LED အလင်းအရင်းအမြစ်များ၏တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာပြီးပြည့်စုံသောစမ်းရေတွင်း၌အဘို့ရှေးခယျြမှု, ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံ, ပြပွဲ, ကုန်သွယ်ရေးနှင့်အနုပညာအလင်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ , ရေအောက်ဆီမီးခွက် LED ရေအောက်ဆီမီးတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါသည်,...
အလင်းရောင်အတွက် LED ၏အကြီးမားဆုံးဝိသေသ, directional ဆက်သွယ်ရေးအလင်း၏ function ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်နီးပါးအာဏာအားလုံးကို LED ကိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရောငျပွတပ်ဆင်ထားနှင့်ထိုကဲ့သို့သောရောငျပွများ၏ထိရောက်မှုသိသာမီးခွက်ထက် ပို. မြင့်မားသည်နေကြသည်။ ထို့အပြင် LED ကိုရောင်ပြန်၏ထိရောက်မှုအဆိုပါ photoeffect...
Led လမ်းအလင်း Led လမ်းအလင်းစျေး Led လမ်းမီး Led မီးအိမ် Led ပြောက်အလင်း